ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်‌‌ မြေအောက်ရေ၏ အရေးပါမှု [Groundwater: critical for sustainable development – in Burmese ] | Water, Land and Ecosystems
ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်‌‌ မြေအောက်ရေ၏ အရေးပါမှု [Groundwater: critical for sustainable development – in Burmese ]
ဥပမာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသည့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သောရေ (အိမ်တွင်းသုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးသုံးရေနှင့် လုပ်ငန်းသုံးရေ)၏ အရင်းအမြစ်သည် မြေအောက်ရေမှ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ မြေအောက်ရေပေါ်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာမှီခိုမှုသည် လတ်တလော လူ့သမိုင်း နှစ် ၅၀ ကျော် အတွင်း ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု ၃ ဆဖြစ်လာသည်။ မြေအောက်ရေသည် ကုန်းနေ၊ရေနေ ‌ဂေဟစနစ်များစွာ ကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီး ဂေဟစနစ် ၀န်ဆောင်မှု (Ecosystem Services)နှင့်လူသားတို့မှီခိုအားထားသည့် သဘာဝသက်ရှိများအတွက် အရေးပါသည်။
CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE). 2020. ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်‌‌ မြေအောက်ရေ၏ အရေးပါမှု [Groundwater: critical for sustainable development – in Burmese ]. Colombo, Sri Lanka: CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE). 16p.